Gurukota Rezvehutano Royambira Veruzhinji nezveChirwere cheCholera
Gurukota rezvehutano Doctor David Parirenyatwa nevamwe vapinda musangano wezvechirwere cheCholera
Gurukota rezvehutano Dr David Parirenyatwa vayambira veruzhinji kuti vaite hutsanana kuitira kuti vasabatire chirwere che cholera icho chakauraya vanhu vana muChegutu.
Dr Parirenyatwa vaudza vatori venhau muHarare kuti mushure mendufu idzi vakaudza makanzuru emunyika kuti aite zvaanokwanisa kuti vanhu vawane mvura yakachena, uye kuti marara atakurwe munzvimbo dzaanounganidzwa kuitira kuti dambudziko iri risapararire kune dzimwe nzvimbo.
Sangano re Zimbabwe Hospital Doctors Association rinoti mashoko aDoctor Parirenyatwa aya akanaka chose, asi dai hurumende yavo yaona kuti vanhu vawana mvura yakachena uye kuti marara, sezvo makanzuru mazhinji asina zvikwanisiro.
Mutungamiri wesangano iri Dr. Edgar Munatsi vanoti iri manzwi ava Parirenyatwa akanaka asi dambudziko rinofanirwa kugadziriswa ndere mvura yakachena nekutorwa kwemarara kuti chirwere ichi chisapararire.
"Mumaguta mazhinji pombi dziri kupfachuka mvura dzine tsvina vana vachitambiramo, izvo zvinokwanisa kuwedzera dambudziko re cholera," Dr. Munatsi vanodaro.
Dr Munatsi vanoenderera mberi vachiyambirawo veruzhinji avo vanenge vaona vachichaya kwenguva refu vanofanirwa kuenda kunovhenekwa uye vanhu vanofanirwa kufashaidza mvura yekunwa nekugeza zvirimwa zvavanenge vatenga kumisika vasati vazvidya, kuitira kuti dambudziko rechirwere ichi risatekeshere.